Izindaba - Isimo Samanje kanye nethemba Lokulawulwa Kwe-PTA Nemakethe
I-PX iyinto ehamba phambili eluhlaza okhiqizayo embonini yonke ye-polyester, Ukushintshwa komkhakha wayo kunomthelela obaluleke kakhulu kuyo yonke imboni ethile. ukungena ngokusemthethweni ekuthuthukisweni kokuzanelisa kweChina eXylene Road Research.
Okokuqala, bhekisisa ukunikezwa kwe-PX yomhlaba kanye nesimo sokufuna. Esizindeni somhlaba wonke iChina, South Korea, India, Japan kanye ne-United States zibalwa ezinhlanu. , njengomkhiqizi omkhulu kunabo bonke emhlabeni, i-India nayo ingamanga amfuno amakhulu. Ngenxa yokuhlinzekwa kwezidingo zasekhaya okucishe kube yisilinganiso, cishe ama-60% wezidingo zonyaka kudingeka athembele Kokungenisa okuvela emazweni angomakhelwane anjengeNingizimu Korea kanye neJapan. Ngo-2018, ukuphuma kwe-PX kweChina kwakungamathani ayizigidi eziyi-10,31, futhi umthamo wokungenisa wawuphezulu njengamathani ayizigidi eziyi-15,63, ngamanye amazwi, udinga ukungenisa amathani angaphezu kwe-1 million we-PX njalo ngenyanga.
Ngaphansi kokuholwa yigebe lemakethe nokuheha inzuzo ukuze kunikezwe ukusekelwa kwenqubomgomo ukwanda kwamandla okukhiqizwa kwePara xylene eChina kwangena inkathi entsha ngo-2005For Isibonelo iHengli Petrochemical eDalian, Shenghong Petrochemical eLianyungang, Jiangsu Ngo-2019, amandla amasha wokukhiqiza wePX ka-4.5 izigidi zamathani weHengli Petrochemical Company, Hongrun Petrochemical Company, eyaqala ukusebenza ngo-Agasti, kanti iHainan Refining neChemical Phase II, eyaqala ukusebenza ngo-Okthoba, bonke sebekubonile ukusebenza kwezentengiso. Ngasikhathi sinye, kwikota yesine, kukhona ukwethulwa okufomethiwe, futhi kungenzeka ukuthi kwethulwe. Kulinganiselwa ukuthi umthamo omusha wokukhiqiza uzofinyelela amathani ayizigidi eziyi-10,3 ngonyaka, okuwukunyuka ngamaphesenti angama-53 esikhathini esifanayo ngonyaka owedlule. Ukusuka ngo-2020 kuya ku-2022, kusazoba namathani ayizigidi ezingama-25, futhi amandla amasha azofakwa emakethe ngokulandelana.
Ngokubhekene nokwasemuva kokuphakelwa kokuhlinzekwa kwasekhaya kwe-PX ye-China kanye nesidingo sakho kuzoshintsha kakhulu. Ngokwanda okusheshayo komthamo wokukhiqiza wePX waseChina, indlela yokuhlinzekwa ngekusasa nephethini yezidingo eNortheast Asia izogcina isiphenduke imali eyengeziwe, futhi esimeni esifanele sezindleko kanye nenzuzo, ingathunyelwa futhi emazweni afunekayo. Ubudlelwano bezentengiselwano ne-mpumalanga ye-Asiya, Kukhona futhi amathuba okuthekelisa ngandlela-thile okuguqukela ekuhwebeni okwenziwe ngaphesheya
Ngokombono wokulethwa komhlaba wonke kanye nephethini yemfuno, iChina ngumthombo wokuphakelwa omkhulu kunayo yonke emhlabeni, kodwa futhi nomthengi omkhulu kunayo yonke. Amandla akhiqizwa eChina minyaka yonke ayengamathani ayizigidi ezingama-52,9, ebalwa ngaphezu kwengxenye yomhlaba wonke. Ngokombono wokugeleza kokuhwebelana kwembulunga yonke, umthamo wokungenisa wonke waseChina ungamathani ayizinkulungwane ezingama-760, ikakhulukazi avela eThailand, eTaiwan naseNingizimu Korea.
Ukusuka esimweni sokuhlinzekwa kwasekhaya, ukuthambekela kwenzuzo kuyinkomba ebalulekile yokuhlinzekwa kwe-PT kwasekhaya. Ngo-2011, i-PHP yangena ekunwetshweni kwamandla, okuholele ekuqubukeni okukhulu kwamandla okukhiqiza, okuholele ekubuyiseni okukhulu kwezinga lenzuzo le-PDA. Ngaphansi kwesimo sokuncintisana, inkambiso yenzuzo yesikhathi eside ithambekele ekushodeni, okunye ukukhiqizwa emuva emuva kuqediwe, futhi ukulethwa nokufuna kuvame ukulingana ngokuqinile.PT kuvulwa ngo-2017, i-PK ingene esigabeni sokuthuthukisa inani lokuchuma. Ngo-2019, izinga lenzuzo le-PTA lakhuphuka laya ku-1700 yuan ngetoni eyodwa.PK ithole igagasi elisha eliphakeme lokukhiqiza.
Umthelela wokuvuselelwa kwemvelo kwe-terminal, kusheshiswe i-polyester, ukunwetshwa kwamandla Ukuqoqwa kwezimboni zepholishi kwenziwe ngcono kakhulu, okuwumkhuba ophambili wezimboni zepholishter eminyakeni emibili edlule. Ngokuhambisana nokwanda, ukunwetshwa kwe-polyester, ukuncintisana kuya kukhula, ukuze izinga lokwenza inzuzo lehlile kakhulu, amandla okukhiqiza ama-polyester esikhathi esizayo anengqondo.
Njengoba ukunwetshwa kwendathane yezimboni kungalinganiswa, isigaba sokulima izinto eziqinile sigcizelele izinga lenzuzo yesitshalo se-polyester, into yokulahleka kwesitshalo ye-polyester phakathi nonyaka. Ngokombono wamathrendi wesikhathi esizayo, ukwehla kokuphakelwa kokuhlinzekwa kwe-polyester ngokuzayo, kanye nezingqinamba zenqubo kanye nezindleko zokukhiqiza eziphansi kuyasiza ekwandisweni kwemali yenzuzo ye-polyester. Kodwa-ke, izingxabano zezohwebo zaseSino-US zizothinta imakethe ngezinga elithile. Amanani entengo yokufakwa kwezindwangu eChina azothinta ngqo ukuthunyelwa kwengubo yaseChina kuye e-United States, yize kunezimpawu zokuthuthuka ezingxoxweni zakamuva zokuhweba zaseSino US. Ubudlelwano beSino-US ukufakwa kweChina kwezintela ezindongeni kunomthelela oqondile ekuthunyelweni kwezingubo zaseChina kuye e-United States. Noma kunezimpawu ezisebenzayo ezingxoxweni zakamuva zokuhweba zaseSino-US, izindwangu ze-EU kanye nezithiyo ezithile zokuhweba ezibhekene neChina ziye zanda kancane kancane eminyakeni yamuva, futhi lo mkhuba ubonakala kakhulu. Lokhu kuzokuthinta ngqo ukuthunyelwa kweChina.
Isikhathi sokuthumela: Aug-21-2020